Ardyda ka timaadda dalalka EU ka baxsan oo tiradoodu dib u soo badatay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ardyda ka timaadda dalalka EU ka baxsan oo tiradoodu dib u soo badatay
La daabacay onsdag 7 augusti 2013 kl 11.35
Waxaa jaamacadaha iyo kulliyadaha Iswiidhen dib ugu soo batay arday ka kala timaadda dalalka ka baxsan Midowga Yurub. In kastoo waxbarashada jaamcadaha Iswiidhen ay lacag badan ku bixiyaan ardayda aan u dhalan dalalka Midowga Yurub ayey haddana arday badani doorbideen in ay wax ku bartaan jaamacadaha Iswiidhen.
Si kastaba ha ahaatee ardayda hadda timaaddaa waxay ka badan yihiin ardaydii timid sannadkii hore, laakiin weli ma gaarin tiradii ardaydii jaamacadaha Iswiidhen ka dhiganeysey sannadkii 2010, kolkaas oo waxbarashada jaamacaduhu ahayd lacag la’aan ama bilaash. Kolkaas waxaa jaamacadaha Iswiidhen dhigan jirey arday gaareysa 17000 oo ka kala yimid dalal ka baxsan Midowga Yurub. Dhanka kale sannadkii 2011 hoos ayey u dhaceen oo waxay gaareen in ka yar 3000 oo arday. Ilaa dayrta soo socota waxaa la filayaa in ay tirada ardaydaasi xoogaa kor u dhaafto 5000 arday. Waxaa arrintaan wax ka yiri Erik Höglund, oo hormuud ka ah jaamacadda Luleå:
- Waa koror aad u yar laakiin waa in aan u aragnaa wax rajo wanaagsan leh. Waxay kaloo ka turjumeysaa in waxbarashada jaamacadaha Iswiidhen ay soo jiidasho leedahay in kastoo hadda lacag lagu dhigto. Waxaase ayaandarro ah in ay jiraan arday badan oo aan fursad u heli karin in ay dalka wax ku bartaan maadaama uusan dhaqaalahoodu u saamaxayn, ayuu yiri Erik Höglund.
Ardayda ka timaadda dalalka ka baxsan Midowga Yurub oo doonaya in ay wax ku bartaan Iswiidhen waxay ugu kacaysaa waxbarashadaasi 100000 iyo 150000 oo karoon sannad-dugsiyeedkii.